GAADIID WALXAHA QARXO LAGA SOO BUUXIYAY OO LAGU QABTAY MAGAALADA KISMAAYO
Loading...	Home Wararka GAADIID WALXAHA QARXO LAGA SOO BUUXIYAY OO LAGU QABTAY MAGAALADA KISMAAYO
GAADIID WALXAHA QARXO LAGA SOO BUUXIYAY OO LAGU QABTAY MAGAALADA KISMAAYO	Monday, 03 December 2012 00:25	Gawaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa ayay ciidamada ammaanka Kismaayo gacanta ku dhigeen daqiiqado kahor markii si lama filaan ah loo fashiliyay howsha qaraxaas.
Labada gaari oo kala ahaa bas (mini bas ama Homey) iyo gaari loo yaqaan Surf ayay Al-Shabaab kasoo buuxiyeen waxyaabaha qarxa waxayna labada gaari kusii socdeen saldhigga magaalada oo ku yaala bartamaha Kismaayo.
Sidoo kale waxaa la qabtay wadayaashii gawaaridaas (Drivers) gawaarida la qabtay midka loo yaqaan Surf noociisu wuu gaduudan yahay wuxuuna iminka horyaalaa saldhigga magaalada.
Falkan lama sheegin cidda fashilisay, laakiin qaar kamid ah Saraakiisha dowlada ayaa xaqiijiyay in laamaha sirdoonka Kismaayo loogu soo sheegay teleefan in labadaas gaari oo qarax saaran yihiin kusoo socdaan.
Markiiba wuxuu maamulku shirkadaha isgaarsiinta ku amray in la damiyo isgaarsiinta waayo waxyaabaha qarxa waxay ahaayeen kuwa lagu soo xiray mobile si meel dheer looga hago qaraxooda.
Muddo saacad ah ayay hawada ka maqnaayeen shirkadaha isgaarsiintu inkastoo iminka lasii daayay, waxaana soconaya howlgalo kale.